musha South AMERICA FOOTBALL STORies Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Black Panther". Our Joel Campbell Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, kuda upenyu, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF-Pitch chokwadi zvishoma zvingazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvehutano hwake hwema-pitch tactical muZimbabwe Cup Cup. Kunyange zvakadaro, vashoma vashoma vadziki vanoziva zvakawanda pamusoro paJoel Campbell's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Joel Nathaniel Campbell Samuels akazvarwa musi we 26th waJune 1992, kuna amai vake, Roxana Samuels nababa, Humberto Campbell muSan José, Costa Rica.
Vabereki vose semufananidzo uri pasi apa vakange vari vatambi vemachishanu vaiziva mumwe nomumwe uye vakadanana murudo nekuda kwemukana wakanaka webhola rayo wakavaunganidza.
Apo Humberto Campbell naRoxana Samuels vakabereka chikamu chechitatu chevana vavo vana (Joel), mazamu ebhola rakabhururuka mumakumbo aDoña Roxana, nokuda kwechikonzero chimwe chete. Mwanakomana wavo anodiwa, Joel Campbell akaberekwa sechizvarwa chechishanu chebhokisi kumhuri yaRoxana Samuels uyo aireva chizvarwa che 4 chekuzvipira kwake kwemhuri. Roxana Samuels (mumudzimai waJoel Campbell) ndicho chikonzero chikuru nei bhora riri muDNA yemwanakomana wake. Kudzoka mumazuva, iye akadanwa Pelela, mukufungidzira, hongu, kune chinoshamisa cheBrazilian Edson Arantes Do Nascimento, Pelé. Akatora mijenya yezvinangwa zvakafanana Pele panguva yake.
Roxana, akambosimbisa kuti Joel mwanakomana wake akadzidziswa mumutambo webhola kubva pachibereko chake chaakasarudza oga. Akaenderera mberi achiti apo paakaberekwa, kunyange paaisakwanisa kutaura mashoko ake okutanga, Joeri akanga atoziva kushevedzera nekuisa zvakasimba pabhora. Kukwanisa kwake kugara achinyemwerera unhu hwakanaka hwaJoel nehama dzake, Junior Humberto, Katherine neNekisha, vakagara nhaka kubva kuna Don Humberto, baba vavo. Vose vabereki vabereki vechiKristu uye vakarera vana vavo kuti vave savo. Campbell akakurira nevatatu vevakoma vake (mazita ataurwa pamusoro).
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Sezvo mwanakomana wemhuri yebhola, bhora raive nguva dzose chikamu chikuru cheDNA yake. Yaiva fevha yakadaro kubva kubva mudiki mujeri Joeri aiva nemabhora maviri. Ikoko kwaiva nebhora rekupfeka iro raichengeta chete kana mumwe wacho achibhururuka achienda kudenga kana kuti mumunda weimwe muvakidzani asinganzwisisiki uyo aizoramba kudzorera bhora kwaari. Panguva ino, Joel Campbell aiva nemakore mana.
Gumbo reCampbell yeGene Gene akaratidzwa mangwanani achiri mwana. Humberto, baba vake vakaita kuti zvive zvakakosha kuti Campbell achiri muduku kuti adzidze tsika dzebhola dzakadai sokuranga nekuzvitsaurira. Kunze kwekuvhiringidzika kwevabereki, kuenda kuchikoro kwakabatsira Campbell pakuva nheyo yakanaka mubasa rake. Kare kare, iye Chikoro chakamupa mukana wekutsvaga kutamba mutambo mumakwikwi munguva yemitambo. Izvi zvakasimudzira kutsunga kwake kutora 'Football' zvakadzama sezvinowanikwa mumufananidzo wechinyorwa chinyorwa pasi apa.
Joeri aiva nechisimba chekuita kuti zviroto zvake zvizadzike uye kuda kwake kwakanga kusiri kungofamba. Campbell akatanga kuSaprissa, kambani yepaCosta Rican inonzi "Carajillos of Valencia"MuSan Rafael Abajo de Desamparados. Kare mushure mezvo, vadzidzisi vamuwana munguva yehuduku hwake, vatsanangurire sekukurumidza kukurwisa nekwakwanisa kukurukura nevashori vake. Iye anewo unyanzvi hwakanaka hwekutambisa uye ndeyekupedzisa kwakanaka. Joel Campbell akapedza huduku hwake hwechidiki semukomana akayaruka.
Mushure mekunge apedzisa basa rake revechidiki, Joeri akangoita maitiro maviri epamusoro pamberi peArsenal vaifamba vachifamba-famba munyika vakamuona. Iye akataurira kuti Sevilla naFiorentina vasaina neVa Gunners.
Pasinei nekufambisa kune Gunners kubva kuSaprissa mu2011, muchengeti wacho aifanira kumirira makore mashanu asati ava nhengo yekutanga nguva dzose nekuda kwekuita kwake 2014 World Cup. Akaramba achitsvaga kufara kutamba kwekambani yemakadhi pasinei nokusiya Arsenal zvakare achikweretesa. Bhora rakazova muti wendarama kuna Campbell, mutambo paakawana kuzadzika. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Righ kubva paudiki, Joeri ave akagara ari Costarican dumbidzo nekuda kwekunaka kwake kunoshamisa. Kugona kwake uye mano ake, pamwe nemararamiro ake kunze kwemukati, kuvaka chifananidzo chakakwana chake. Chokwadi ndechekuti, Joel Campbell anoda kunaka uye akatora nguva yake pakuwana zvakanakisisa pamwoyo wake.
Joeri akawana rudo muMaria Fernanda Cascante uyo akamboitika kuva wake bestie. Ukama hwavo hwakakwira kubva pachigaro chebhetie ku rudo rwechokwadi.
Pakarepo mushure mokunge asangana naFernanda akanaka, Hazvina kutora nguva Joel Campbell asati aziva vabereki vake avo vakavapa zvikomborero zvavo, rubatsiro uye hukama hwehukama.
Joel Campbell weGermanda kwemakore 8 uye rudo rwavo rwakatungamirirwa nekukwanisa kwavo kuwirirana kune dzimwe nguva dzakanaka uye dzakaoma.
Mushure mokupemberera gore re8th rehukama hwavo, kuroorwa kwekuroorana kwakauya. Muchato wavo wakaitwa muIglesia de Pozos, de Santa Ana kuCosta Rica munaJune 2017.
Mutambo uyu wakabatanidzwa neCosta Rican pamwe navo vese Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, uye Keylor Navas. Joel Campbell akanakidzwa noupenyu hune huro hwakanaka hwakaratidzwa paakambopemberera pamuviri wake pamuviri pamufananidzo uri pasi apa.
Fernanda akabereka mwana akanaka musikana uyo vaviri vacho vainzi Brianna Campbell. Anoramba achiri mwana wavo wokutanga uye wega bedzi pane imwe nguva yekunyora. Joeri sezvinoratidzwa pasi apa zvakanyanyobatanidzwa kuna Brianna Campbell, mwanasikana wake akanaka.
Joel Campbell ane manzwiro uye ane hanya, uye ane hanya zvikuru nezvezvinhu zvemhuri uye imba yavo.
Vose Joel Campbell, mudzimai wake uye mwanasikana anodiwa anoda kuenda kunzvimbo yezororo kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakasikwa.
Kuva nemudzimai akanaka uye mwana akanaka chaizvoizvo kunoita kuti Campbell ishanduke kuva nani, nokudaro kuva pedyo zvikuru naMwari. Joeri anoona mudzimai wake, amai nemwanasikana sechiso chechipiri muhupenyu hwake, uye wekutanga ari Mwari.
Roxana Samuels, amai vaJoel, vakaratidza kuti mushure mechikamu chimwe nechimwe, mwanakomana wavo anoverenga Pisarema 27. Zvakanaka, tsika iyi yakatanga sekurudziro kubva kumudzimai wake uye amai. Iyo inzira iyo Campbell inotenda nayo nokuda kwezvaakaita.
Pisarema 27 rinoti; The tenzi ndiye chiedza changu noruponeso rwangu; Ndiani wandichatya? Ishe ndiye simba rehupenyu hwangu; Ndingatya ani?
2 Apo vakaipa, kunyange vavengi vangu nevavengi vangu, vakauya kwandiri kuti vadye nyama yangu, vakagumburwa ndokuwa.
"Shanyira Bhaibheri Kuti Uwane Zororo!"
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Vabereki Vake: "Mhuri yaHumberto inofara", anodaro Doña Roxana amai vemusha. Zvakakosha kuziva kuti Humberto uyo aichimbova mugadhi wemutambo iye zvino ari Seaman asi mudzimai wake (Joel Campbell's mum) ari mutambi wemuuto.
Mhuri yeCampbell ine mhedziso yokuti haifaniri kushanyira ani zvake kana chimwe chinhu. "Vose vane mamiriro akafanana, vakaenzana," anodaro baba vanofananidzirwa pasi vanobatanidzwa mukuona kutamba kwemwanakomana wavo.
Zvimwe pamusoro paJoel Campbell's Mother: Amai vaJoel Campbell, avo vekare-bhora vakatamba basa rake paRobert Stars yeAtlantic iyowo iri boka revakadzi iro murume wavo vakatungamira vasati vawana mumwe uye vachidanana. Vose Roxana nemwanakomana wake Campbell vaswedera pedyo. Unhu hunoitwa muchitauri chake pasi apa.
Dona Roxana akazvireurura kune izvi: "Ndakamwisa Joeri nguva dzose pamutsipa paaiva mwana. Kusvikira zuva, Joel achiripo ane mitsipa iri pedyo naye. Anotora iyo kwose kwaanoenda, sechinhu chinofadza. Izvo chete mutezo! "
Vanun'una: "Iye ari mutambi anozivikanwa kwete chete nekuda kwemitambo yake asi nekuda kwekugona kwake kubatana nekugara pedyo nehama dzake," akadaro Michel, muzukuru wake. Joel Campbell anokurumidza kubatsira vamwe, saiyewo akakurumidza kudzivisa kupesana nehama dzake neshamwari dzinomukarira.
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Zvimwe Zvako
Joel Campbell anoda mabhiza asi anotya kukwira rimwe.
Campbell anorarama hupenyu hwakaisvonaka chaizvo chatinokwanisa kuziva kuburikidza neAustin yake yepamutemo. Ane kambani yake yekambanikoni.
Kunze kwekutasva motokari dzakasiyana, Joel Campbell ishamwari yepedyo yembwa yake yemhuka.
Kana ari iye Strengths, Campbell is Anononoka, anonyanya kufungidzira, akavimbika, mupfungwa uye anonzwira tsitsi zvikuru.
Kana ari iye Hobbies, Campbell anoda Art, dzimba dzekuzvivaraidza, dzinofara pedyo kana mumvura, kubatsira vanodiwa (kunyanya vabereki nevomunin'ina), nekutsaurira nguva yake yakasununguka nekombiki yake kumba. Mishumo yeMedia inoratidza kuti iye mudzidzi paYunivhesiti purogiramu yepaIndaneti.
What Joel Campbell Haafariri: Vatorwa, chero kutsoropodza kwaamai vake uye kusunungura ruzivo pamusoro pehupenyu hwake.
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Wierd Facts
Campbell iye pachake aine unhu. Akambofambisa kutenga 100 mapetti ematambi ebhokisi kuti azviwanire. Nhamo, haana.
Anopemberera zvinangwa zvake nekukwazisa saiye nzira yekuzivisa kune vakoma vake. Izvi dzimwe nguva zvinoteverwa nemhemberero ye wierd sezvinoratidzwa pasi apa.
CHOKWADI KUTI: Tinotenda nekuda kwekuverenga kwedu Joel Campbell Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Alex Oxlade Chamberlain Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Nyamavhuvhu 27, 2020